XOG: Maxaa ka socda caasumada Soomaaliya, oo ay qeyb ka yihiin Madaxda dawlad gobaleedyada ee kusugan Muqdisho? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid 49 mins ago
Home 2018 February W.Gudaha, Wararka Maanta XOG: Maxaa ka socda caasumada Soomaaliya, oo ay qeyb ka yihiin Madaxda dawlad gobaleedyada ee kusugan Muqdisho?
XOG: Maxaa ka socda caasumada Soomaaliya, oo ay qeyb ka yihiin Madaxda dawlad gobaleedyada ee kusugan Muqdisho?
February 13, 2018 |by W LAASCAANO| 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Inkastoo uu dhamaaday shirkii Hogaamiyaasha Siyaasadda ee looga hadlayay Ammaanka, Siyaasadda & qeybsiga Kheyraadka Baddaha ku jira ee ay lahaayeen maalmihi lasoo dhaafay madaxdaas, haddana wali kulamo siyaasadeed adag ayaa kasocda gudaha caasumada dalka.
Madaxda dawlad gobaleedyada ayaa kulamo hoose la yeelanaya Siyaasiinta iyo Xildhibaanada baarlamaanka oo ay kala hadlayaan marxaladaha siyaasadeed ee dalka iyo qaababka ugu wanaagsan ee loo wajahayo doorashooyinka 2020-ka, sidaas oo kalena ay qolo kasta dhankeeda han kaga jiro.
Warsidaha PTIMES wuxuu ogaaday in ay dhaceen Is aragyo siyaasadeed oo si gaar ah u dhexmaray mucaaradka Xukuumada Kheyre iyo Madaxda dawlad gobaleedyada oo ay isla soo qaadeen arrimaha taagan.
Hogaamiyaasha maamulada qaarkood waxay xooga saareen sidii wax looga oran lahaa awooda ciidan ee ay adeegsatay dawladda Faderalka 17 December iyo bilowgii sannadkan oo ay ku weerartay siyaasiin mucaaradsan aragtideeda.
Warar aan wali la xaqiijin ayaa sheegaya in uu bilow yahay qorshaha qorista Mooshin ka dhan ah Xukuumada Ra`iisulwasaare Xasan Cali Kheyre oo ay qeyb ka yihiin mudanayaal katirsan baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya.
Mudanayaasha baarlamaanka qaarkood iyo Asxaabtooda siyaasadeed ayaa karkarinaya qorshaha xil ka qaadida Raysalwasaare Kheyre, oo ay ku eedaynayaan in uu ku tikrifalay Hantida dawladda iyo awooda Dastuuriga ah oo si kale loo adeegsaday.
Xildhibaanada qaar kamid ah ayaa loolan adag ugu jira, sidii ay dawlad gobaleedyada ugala hadli lahaayeen arrintooda oo ay meelmar uga dhigi lahaayeen, gaar ahaana qorshaha mucaaradida ee Xukuumada oo ay u arkayaan in ay u baahan tahay dib u sixid balaaran.
Ka sokow loolanka siyaasadeed ee socda Madaxda dawlad gobaleedyada ayaa xildhibaanada deegaanadooda ka dhaadhicinaya qorshe loogu magac daray (PAY BACK TIME) oo looga fakarayo in mudo xileedka dhinacyada oo dhan la mideeyo, si doorasho caam ah uga dhacdo dalka oo idil sannadka 2020-ka.
Kalfadhiga mudanayaasha golaha baarlamaanka ayaa furmi doona dhawaan, kaas oo ay welwel weyn ka qabto Xukuumada Faderaalka, maadaama uu xirmay kalfadhigii hore iyadoo ay Xukuumada ku dhaganayaan mudanayaal ka badan 130 Mudane oo kamid ah baarlamaanka.
One thought on “XOG: Maxaa ka socda caasumada Soomaaliya, oo ay qeyb ka yihiin Madaxda dawlad gobaleedyada ee kusugan Muqdisho?”
CAYDARUUS February 13, 2018 at 12:48 pm · Edit